सनराइज बैंक लगनखेलमा :: Press Chautari ::
सनराइज बैंक लिमिटेडले हरिसिद्घि शाखालाई लगनखेलमा स्थानान्तरण गरेकोे छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रमान प्रधानले कात्तिक ७ विहिबार उक्त शाखाको शुभारम्भ गरेका हुन् । हरिसिद्घि शाखाको सम्पूर्ण कारोबार लगनखेलस्थित सो नयाँ शाखाबाट सञ्चालन गरिने बैंकले जनाएको छ ।
बैंकको यस शाखा मार्फत लगनखेल क्षेत्रमा अत्याधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्नुका साथै त्यस क्षेत्रमा निक्षेप संकलन तथा साना एवं मझौला ब्यवसाय, हायर पर्चेज लगायत अन्य कर्जाका साथै सेफ डिपोजिट लकर सुविधा र अन्य सेवाहरु प्रवद्र्घन गर्नको लागि शाखा विस्तार गरिएकोे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधानले बताए । यस शाखा सञ्चालनबाट लगनखेल क्षेत्रका ग्राहक, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणहरुलाई बैंकिङ्ग सेवाको लागि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको बताएको छ । सो कार्यक्रममा स्वस्थ प्रतिस्पर्धी बैंकिङ्ग प्रणालीको विकास गर्नका साथै नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी शाखा बिस्तार गर्दै बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको प्रधानले बताए ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रमान प्रधानले हाल बैंकको निक्षेप रु. २६ अर्ब २१ करोड, कर्जा लगानी रु. २१ अर्ब १८ करोड, ग्राहक संख्या करिब २ लाख २२ हजार तथा चुक्ता पूँजी २ अर्ब १ करोड ५० लाख रहेको जानकारी गराए । बैंकको हाल शाखाहरुको संख्या ५० र ए.टि.एम.को संख्या ५९ पुगेको छ । बैंकले सनराइज सेफ डिपोजिट लकर सुविधा, भिसा डेबिटकार्ड, मोबाइल बैंकिङ्ग, ईन्टरनेट बैंकिङ्ग, रेमिट्यान्स लगायत आधुनिक बैंकिङ्ग सेवा समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
शुक्रवार, २०७० कार्तिक ०८ गते २३:०४ / Friday, Oct 25, 2013 11:04 pm